Uthisha ufunze umfundi i-pad kufundwa | News24
Uthisha ufunze umfundi i-pad kufundwa
Durban - Zishubise isimo izinsolo ezimbi ngothisha waKwaSithebe Primary School, KwaSithebe, eMandeni ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal osolwa ngokufunza umfundi wakwaGrade 6 umsubelo (i-pad) phambi kwabanye abafundi egunjini lokufundela.
Lesi sigameko kuthiwa senzeke ngaphambi kokuba kuvalwe izikole, zivalelwa isigaba sesithathu sonyaka.
ILANGA lithole ukuthi lo mfundi wesilisa oneminyaka engu-12 ubudala - esiligodlile igama lakhe ukuvikela isithunzi sakhe - vele uyinto yokugcakela kulo thisha esingeke simdalule, njengoba evame ukuhlekisa ngezicathulo nomfaniswano wakhe.
Kubikwa ukuthi umndeni walo mfundi udla imbuya ngothi - njengoba engekho umuntu osebenzayo kuwona - okwenza nesimo sakhe esikoleni singabi sihle.
ILANGA lithole ukuthi ngaphambi kokuba lo thisha egile lo mkhuba, ubize isisulu ngemfene ehlala nezinkawu kubo.
Umthombo uthi - yize kungaziwa ukuthi yini edala ukuba umfundi afunzwe umsubelo - uthisha usukume esihlalweni sakhe wama emuva kwesisulu wasibamba ngekhanda wasifunza umsubelo ngenkani kwaduma igumbi lokufundela abafundi behleka.
Uthi ngendlela ahlukumezeke ngayo lo mfundi, ubesenqume ngisho ukuyeka isikole. "Umfana uhlale ekhaya isonto lonke engalubhadi esikoleni ngoba esaba ukuthi abafundi bazokwenza inhlekisa ngaye.
"Uqale ukuya esikoleni ngoLwesithathu olwedlule. Nakhona ukuze aphindele uncengiwe ngoba sekwenzelwa ukuba akwazi ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka. Indlela ahlukumezeke ngayo kunzima ukuba aye esikoleni ngoba akazi ukuthi lo thisha uzobukisa nagye athini njengoba kuyinto ajwayele ukuyenza.
"Ngikhuluma nje umfundi uselinde kuphele unyaka ukuze aphume kulesi sikole ngoba lo thisha usemhlukumeze kwanele," kusho umthombo.
UNkz Nokuthula Mzimela, ongunina walo mfundi, utshele ILANGA ukuthi akayazi yena le nto okukhulunywa ngayo - ukuthi indodana yakhe ifunzwe umsubelo.